Siyaasadda Magac-u-yaalka-La-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta
Siyaasadda ku dhawaaqa
Maxaynu u weydiinaa magac-u-yaal?
Si fudud loo dhigo, wax badan ayaa la isku haystaa. Weydiinta magac-u-yaalka dadka waa hal dariiqo oo looga shaqeeyo dhanka meelaha loo wada dhan yahay, iyadoo la hubinayo in dadku ku qanacsan yihiin oo lagu tixraacayo magaca iyo magac-u-yaalka ay adeegsadaan.
Waa muhiim in qof kasta oo jooga PHFO-gudaha, dhacdooyinka bulshada, shirarka lammaanaha, meel kasta oo aan joogno, run ahaantii-- dareemo ixtiraam, qiimee iyo badbaado. Isticmaalka luqadda ku habboon waa hal dariiqo oo aan ku hubin karno in asxaabteena transgender-ka iyo la-hawlgalayaasha loola dhaqmo si cadaalad ah goobta shaqada. Waxaan ognahay in dadka trans-ka ah lagu hayo rabshado heerar sare ah iyo takoorid gudaha Maraykanka, waxaana muhiim ah in goobaha shaqada iyo asxaabtooda ay u istaagaan midnimada dadka dhamaan aqoonsiga jinsiga, iyo gaar ahaan dadka trans. Isticmaalka magac-u-yaalka saxda ah ee qof waa hab fudud oo lagu dareensiin karo soo dhawayn iyo ammaan.
Haddaynu nahay urur ka-hortagga gaajada, waxaan u baahannahay inaan ogaanno in aysan ahayn oo keliya bulshooyinka LGBTQ ay si xad-dhaaf ah u saameeyeen gaajada iyo faqriga, laakiin saameynta aysan si siman u faafin. Dadka jinsiga bedela waxay afar jeer uga dhow yihiin marka la barbar dhigo dadka guud inay helaan dakhliga qoyska ka yar $10,000 sannadkii (2014) waxaana ognahay inay tani khatar weyn gelinayso cunto yarida. Weydiinta magac-u-yaalka kaliya maaha abuurista deegaan loo dhan yahay, laakiin waa hal qayb oo lagu hagaajinayo sinnaanta shaqadeenna.
Ma u sheegi kartaa qof jinsigiisa/magacyadiisa kaliya adigoo eegaya iyaga?
Maya! Muujinta jinsiga lama mid aha aqoonsiga jinsiga. In kasta oo ay run tahay in dad badan tibaaxaha jinsiga iyo aqoonsiga jinsiga ay iswaafaqsan yihiin, taasi run maaha qof kasta. Ma ogaan kartid adigoo eegaya qof inuu yahay cis, trans, genderqueer, jinsiga ama wax kale. Waxaa dheer, sababtoo ah waxaad u maleyneysaa in muujintooda jinsiga ay la jaan qaadayaan magacyo gaar ah macnaheedu maaha inay taasi run tahay.
Marka laga reebo xaqiiqda ah inaadan u sheegi karin jinsiga qofka marka aad eegto iyaga, waxaa laga yaabaa inaysan isticmaalin "iyadu" ama "isaga/isaga" magac-u-yaalka! Waxaa jira magac-u-yaalo kala duwan oo aan binary ahayn, kuwa ugu caansan waa "iyaga/iyaga".
Halkan PHFO, waxaan rabnaa in aan "ku bedelno weydiinta." Way fiicantahay in la hubo in la ogaado intii la malayn lahaa!
Haddii uu qof ku weydiiyo su'aashan, waxaad sidoo kale u sharxi kartaa iyaga wax la mid ah, "Kaliya waxaan samaynayaa qaybtayda si aan u ahaado mid loo dhan yahay intii suurtogal ah, waxaan rabaa in aan qayb ka noqdo samaynta jawiga shaqada meel ammaan ah waana mid ka mid ah dariiqooyinka ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee qof walba lagu dareensiin karo raaxo."
Sideen u waydiiyaa qof magaciisa?
"Waa maxay magac-u-yaalkaagu?"
Si kale ayaa ah inaad marka hore isbartid naftaada iyo magac-u-yaalkaaga. Tani waa caado wanaagsan in la galo, oo aan qofka kale ogaano kaaga isku mar!
"Magacaygu waa X, waxaan isticmaalaa (Iyada/iyada) | (Iyaga/iyaga) | (Isaga/Isaga) magac-u-yaal. adiga ka waran?”
Maxaa dhacaya haddii aan isticmaalo magac-u-yaal oo khaldan?
Haddii aad khalkhal gasho (oo aad doonto, qof kastaa wuu sameeyaa, waa qayb nolosha ka mid ah), raali gelin, is sax oo hore u soco.
Qofka aad si khaldan u galisay, ama aad magac-u-yaalka khaldan u isticmaashay, cudur daarka ama sharraxaadda dheer waxay u noqon kartaa niyad-jab iyo/ama kicin. Dadka badankiisu waxay door bidaan raaligelin iyo dammaanad inaad wax ka fiican samayn doonto. Xarunta Q waxay leedahay ilo waxtar leh oo ku saabsan sida looga falceliyo haddii aad qof si xun u xumayso.
Hal shay oo aad samayn karto waa ku celcelinta adeegsiga magac-u-yaalo kala duwan! Shaxdan waxtarka leh waxay tusinaysaa sida magac-u-yaalka kala duwan loo isticmaalo:
iyada/iyada – Way qososhay, waan u yeedhay, Indhaheedu way dhalaalayaan, Taasi waa teedii, way jeceshahay nafteeda
Isaga/isaga - Wuu qoslay, waan u yeedhay, indhihiisu way dhalaalayaan, taasu waa kiisii, wuu jecel yahay naftiisa
Magac-u-yaala-Dhex-dhexaad/Aan laba-dhaxaad ahayn
Kuwaas waxaa inta badan isticmaala dadka jinsiga ah ama jinsiga aan ku qanacsanayn. Wax badan oo ka badan kuwa halkan ku qoran ayaa jira!
Iyaga/Them – Way qosleen, aniguna waan u yeedhay, Indhahoodu dhalaalayaan, waa koodii, way is jecel yihiin
Ze (ama zie) - Ze ayaa qoslay ("zee), waxaan u yeedhay hir ("heer"), Indhuhu way dhalaalayaan ("heer"), Taasi waa hirs ("heers"), Ze is jecel ("heerself")
Haddii qaar ka mid ah erayada halkan lagu isticmaalo ay kugu cusub yihiin, ha welwelin! Waxaad hoos ka heli kartaa qeexitaanno qaar, ama fiiri GLAAD Tilmaamaha Tixraaca Warbaahineed (http://www.glaad.org/reference) kaas oo ah xog badan oo ku saabsan jinsiga iyo jinsiga!
Cisgender (ama "cis") (adj.)
Eray ay dadka qaar u adeegsadaan in ay ku sifeeyaan dadka aan sinjiga lahayn. "Cis-" waa horgale Laatiinka ah oo macneheedu yahay "dhinac la mid ah," oo sidaas darteed, antonym ee "trans-." Habka aad loo fahmayo ee lagu tilmaamo dadka aan transgender-ka ahayn ayaa ah in si fudud loo yiraahdo dadka aan jinsiga ahayn.
Qofka gudaha, oo si qoto dheer loo hayo dareenka jinsigiisa. Dadka transgender-ka ah, aqoonsigooda lab iyo dheddig ee gudaha lama mid aha jinsiga loo qoondeeyay markii ay dhasheen. Dadka intooda badan waxay leeyihiin aqoonsiga jinsiga nin ama naag (ama wiil ama gabadh). Dadka qaarkiis, aqoonsigooda jinsiga si fiican uguma habboona labadaas doorasho midkood. Si ka duwan muujinta jinsiga (hoos eeg) aqoonsiga jinsiga maaha mid u muuqda kuwa kale.
Muujinta dibadda ee jinsiga, oo lagu muujiyey magaca qofka, magac-u-yaalka, dharka, timaha, dabeecadda, codka, iyo/ama sifooyinka jirka. Bulshadu waxay tilmaamahan u aqoonsanaysaa lab iyo dheddig, in kasta oo waxa loo arko lab ama dheddigga ay isbeddelaan waqti ka dib oo ay ku kala duwan yihiin dhaqan ahaan. Caadi ahaan, dadka transgender-ka ah waxay raadiyaan inay isku hagaajiyaan muujintooda jinsi iyo aqoonsigooda jinsiga, halkii ay ka ahaan lahaayeen jinsiga loo qoondeeyay dhalashada.
Jinsiga oo aan waafaqsanayn
Eray loo isticmaalo in lagu qeexo dadka qaarkood oo ay muujinta jinsigu ka duwan tahay filashooyinka caadiga ah ee raganimada iyo dheddigga. Fadlan ogow in dhammaan dadka aan la jaan qaadi karin jinsiga aysan u aqoonsanin inay yihiin transgender; sidoo kale dhammaan dadka transgender-ga ma aha kuwo aan ku habboonayn jinsiga. Dad badan ayaa leh tibaaxaha jinsiga oo aan gebi ahaanba caadi ahayn - xaqiiqadaas oo keliya kama dhigayso jinsi beddelasho. Rag iyo dumar badan oo transgender ah ayaa leh tibaaxo jinsi oo caadiyan ah lab ama dheddig. Inaad noqoto transgender kaliya kama dhigayso qof jinsi aan ku habboonayn. Erayga isku mid maaha transgender waana in la isticmaalo oo kaliya haddii qof iskii u aqoonsado inuu yahay mid aan waafaqsanayn jinsiga.
Transgender (ama "trans") (adj.)
Erayga dallad ee dadka aqoonsigooda jinsiga iyo/ama muujinta jinsiga ay ka duwan tahay waxa sida caadiga ah lala xiriiriyo jinsiga loo qoondeeyay markii ay dhasheen. Dadka ku hoos jira dallada transgender waxay isku tilmaami karaan iyaga oo isticmaalaya hal ama in ka badan oo ah ereyo kala duwan - oo ay ku jiraan transgender. Qaar ka mid ah ereyadaas ayaa lagu qeexay hoos. Adeegso ereyga sharraxaadda ee uu qofku doorbiday. Dad badan oo transgender ah ayaa dhakhaatiirtoodu u qoraa hormoono si ay jidhkooda ula qabsadaan aqoonsiga jinsiga. Qaar baa sidoo kale qalliin lagu sameeyaa. Laakin dhammaan dadka transgender-ku ma qaadi karaan ama qaadi doonaan tillaabooyinkaas, aqoonsiga transgender kuma xirna muuqaalka jirka ama hababka caafimaadka.
Aan binary ahayn iyo/ama lab iyo dhedig
Shuruudaha ay adeegsadaan dadka qaar ee la kulma aqoonsigooda jinsiga iyo/ama muujinta jinsiga sida ka baxsan qaybaha ninka iyo naagta. Waxay ku qeexi karaan jinsigooda inay ku dhacaan meel u dhaxaysa ninka iyo naagta, ama waxay ku qeexi karaan inay gebi ahaanba ka duwan yihiin erayadan. Erayga isku mid maaha transgender waana in la isticmaalo oo kaliya haddii qof iskii u aqoonsado in aanu ahayn binary iyo/ama jinsi
Toosan ee Sinnaanta
Aragtida u doodaha ee trans 101 su'aalaha
Hagaha kheyraadka waxaa laga soo qaatay Katie Frederick's “Trans and Pronoun Info” hagaha.